FANOMEZANA FAHALEOVAN-TENA NY FARITRA : Tonga ireo fitaovana vaventy fanaovan-dalana
« Izay rehetra nampanantenaiko tsy maintsy tanterahiko ». Nigadona, omaly, tao amin’ny seranan-tsambon’i Toamasina ireo fitaovana hatolotra ireo Faritra hanamboarana ny lalana. 25 janvier 2021
Tafiditra indrindra ao anatin’ny fandaharan’asan’ny Filoham-pirenena hanomezana fahaleovan-tena ho an’ny Faritra tsirairay sy hampiharana ny fitsinjaram-pahefana tena izy. Fitaovana feno, manara-penitra ary vaovao ireto tonga ireto. Ahitana « niveleuses », « bulldozers », « compacteurs », « chargeuses » sy « camions citernes ». Noraisina omaly tao amin’ny seranan-tsambon’i Toamasina izany ary hatolotra hotantanan’ny Faritra.
Hanomboka araka izany ny fifaninanana masina eo amin’ireo Faritra samy Faritra sy ny governora samy governora ka lalana 200km na 250km isan-taona fara fahakeliny no hatao. Ny fanamby hotratrarina miaraka dia ny hamerina indray ireo lalana 50 000 km nisy teto talohan’ny fahaleovantena izay 15 000 km sisa no hany afaka miasa ankehitriny. Ny faritra Sava, Androy, Analamanga, Bongolava, Vakinankaratra, Boeny, Vatovavy Fitovinany ary Analanjirofo no handefasana avy hatrany ireto andiany voalohany ireto ary ho avy amin’ny volana marsa izao kosa ny andiany manaraka.
Zava-dehibe amin’ny fampandrosoana ny Faritra ny fanolorana ireto fitaovana ireto, hoy ny Filoha, Andry Rajoelina. « Manova ny politika sy ny fitantanana isika, omena fitaovana manara-penitra sy harifomba ny Faritra rehetra manerana ny Nosy. Ny lalana potika sy tsy azo ifamezivezena intsony dia tsy maintsy havaozina indray ary takina ao anatin’izany ny fifaninanana masina eo amin’ny samy Faritra », hoy ny nambarany. Hentitra ny fanaraha-maso ireto fitaovana ireto. Tsy azon’ny Faritra atao ny mampiasa izany amin’ny tsy tokony ho izy satria ny fitaovana tsirairay avy dia efa nampiana GPS hahafahana mandrefy sy mahafantatra ny ora niasany. Ho hita amin’ny alalan’ny fitaovana hapetraka amin’ireto milina goavana ireto koa ny lalana namboarina sy ny fandaniana toy ny lasantsy, gazoala ary menaka nampiasaina mandritra ny fanamboarana lalana iray.
Tany amin’ny Repoblika voalohany no nahazo fitaovana vaventy tahaka ireto ny teo anivon’ny Minisitera misahana ny asa vaventy. Izao kosa dia ny lehiben’ny Faritra mihitsy no tolorana fitaovana mivantana hahafahana manatratra ny fanamby napetraka. Hisy fanaovana tombana eo amin’ny samy Governora amin’ny herintaona tahaka izao ary ho fantatra mandritra io izay nahavita be. Nanantitra ny Filoha fa hiavaka tsara ny asan’ny Fanjakana foibe sy ny Faritra amin’izao. Tsy hisy intsony ny fialana andraikitra sy fanononana ny anaran’ny Fanjakana mahakasika ny faharatsian-dalana. « Rehefa tsy mahavita azy ny lehiben’ny Faritra na ny govenora dia izy ireo no mifanazava amin’ny vahoaka fa tsy ny Filoham-pirenena intsony », hoy ny Filoha, hentitra.